About Us - Kingnor Imp & EXP.. Co., Ltd
Hebei Makiinado dhoofinta iyo Co., Ltd. waxaa loo beddelaa shirkadda si wadajir ah-stock ganacsiga shisheeye ee October 2005. Sida ururka ka horeeyey, Hebei Branch of China National Makiinado Import & Export Corporation waxaa la aasaasay bishii October 1974, taas oo ahayd shirkadda ugu horreysa dhoofinta iyo soo-dejinta oo diiradda saaraya waxyaabaha farsamo iyo korontada ee gobolka Hebei.
Kingnor dhoofinta iyo Co., Ltd. (Shanghai) waxaa la aasaasay sanadkii 2002 shirkad walaashiis of Hebei Makiinado, oo ku yaalla Shanghai, Shiinaha iyo leedahay baaxadda ganacsiga la mid ah sida xafiiska madaxa.
isagoo mid ka mid ah dhoofinta hoggaamiye ee Shiinaha ka, Shirkadda waxaa ku takhasusay noocyada kala duwan ee filtarka, tuubooyinka, tuubbooyin, flanges iyo alaabooyinka kale ee la xiriira dhuumaha biyaha, saliid, gaaska iyo wixii la mid ah.
Cuntooyinkan waxaa intooda badan laga dhoofiyay suuqyada adduunka oo dhan, oo si ballaaran loo isticmaalo in dhuumaha kala duwan, dhismaha iyo mashaariicda. heerarka caalamiga ah oo kala duwan, dhammaan waxyaabaha our gacanta tayo adag yihiin oo raaci karaan dhammaan dalabaadka macaamiisheena '.
heerarka caalamiga ah oo kala duwan, dhammaan waxyaabaha our gacanta tayo adag yihiin oo raaci karaan dhammaan dalabaadka macaamiisheena '.
Waxaan leenahay waayo-aragnimo qani ah hawlgalka ee dhoofinta, iyo sidoo kale lacag dareenka on ruuxa shaqada of our 'Tayada waa tii ugu horaysay, Service waa paramountcy ah', sidaas group lammaanaha noqday iyo aad u badan ka weyn. Waxaan ogsoonahay in waajib ay tahay in la dhiso ilaa buundada ee macaamiisha iyo qeybiyaha, aad u ogaato wax soo saarka oo tayo leh qeybiyaha u fiican for our macaamilka iyo baaritaan macaamiisha saxda ah ee our qeybiyaha. Waxaan soo dhawaynaynaa macaamiisha cusub inuu nagu soo biiro iyo in la dhiso ilaa mustaqbalka dhalaalaya.
Waxaan diyaar u nahay in aad bixisaan ugu fiican!
Ductile Iron dilaaca tuuboyinka rakiban, Ductile Iron tuuboyinka rakiban, Shiinaha Ductile Iron tuuboyinka rakiban, Ductile Iron tuuboyinka rakiban dilaaca, All Category